Porsche CEO na-ekwu maka Apple | Esi m mac
Porsche CEO na-ekwu maka Apple
Dị ka ọhụrụ leaks metụtara Apple Car, a imepụta ụgbọ ala eletrik anaghị aga n'ihu etu o kwesiri. N’agbanyeghi, n’ụbọchị nke ọzọ onye isi ndi Mercedes kwuru na Apple na-eme ihe nke ọma, otu ụbọchị mgbe arụkwaghịm nke isi ọrụ ahụ. Ọ nwere ihe adịghị mma. Ma ọ bụghị na a gwara gị ma ọ bụ na ị na-atụ ụjọ ya.
Egwu maka ụgbọ ala Apple n'ọdịnihu nke ka dị n'uche ndị injinia Cupertino? Agaghị m ahụ ya nke ọma. Luckily CEO nke Posrche na-ekwu uche yaN'adịghị ka ọtụtụ ndị na-emepụta akụrụngwa, ha yiri ka ha na-ada ụda mgbe a jụrụ ha maka ọdịnihu Apple Car.
Ọtụtụ ndị ọkachamara na-atụle na Echiche nke Apple ịbanye n'ụlọ ọrụ akpaaka enweghị isi ma ọ bụ ọdụ. Pụ n'ahịa ị na-achịkwa n'ụzọ zuru oke ịbanye na ụlọ ọrụ asọmpi nke akpaaka na ndị ọzọ na nke ụgbọ ala eletrik ebe Tesla bụ eze na-enweghị mgbagha n'ụwa, ọ dị ka ọ gaghị abụ ezigbo echiche maka ndị nyocha ọ bụla.
N'ajụjụ ọnụ ndị mgbasa ozi German na onyeisi ụlọ ọrụ Porsche ugbu a, Olivier Blume kwuru na «iPhone bụ n'akpa ma ọ bụghị n'okporo ụzọ«. Goodzọ dị mma iji katọọ mkpebi nke ụfọdụ ụlọ ọrụ iji gbalịa ịwụli elu n'ahịa ụgbọ ala. O kwukwara na ntinye nke ụfọdụ ndị nrụpụta maka ịkwọ ụgbọ ala kwụrụ ọtọ agaghị ahụ ya na ụlọ ọrụ ya. Porsche ajụwo ugboro ugboro isoro ndị ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ kwalite ụgbọ ala na ọgụgụ isi. Onwe m, echeghị m na onye ọ bụla nwere ego iji nwee ọ enjoyụ na Porsche ga-azụta ya iji wee kwụrụ onwe ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Porsche CEO na-ekwu maka Apple
Google dị n'elu Apple na ogo nke ụlọ ọrụ kachasị baa uru n'ụwa
Nkà na ụzụ Li-Fi ọ ga-erute kọmputa Apple?